७५१ पालिकाको नतिजा आयो, एउटामा मतगणना जारी, अर्कोमा मतदान हुने
काठमाडौंमा सडक विस्तार होइन, फुटपाथ विस्तार गर्नुपर्छ: गगन थापा
काठमाडौंको खाल्डो या दार्जीलिङको पहाड, कहाँबाट शुरु भयो त आधुनिक नेपाली सङ्गीत ? के के आधुनिक वाद्ययन्त्र, गीत र गायन भएपछि आधुनिक नेपाली सङ्गीत हुन्छ ? आज पनि यो अनुत्तरित प्रश्न हो। किनकि अगुवा कलाकारका प्रचलित गीत–गायनमा पनि आधुनिक बाजा पियानो, क्लारिनेट, तबला, गितार आदि प्रयुक्त छन्।
वाङ्‌मय सेवा भट्टराई
केही मीठो बात...होइन ‘बाट’ गर !
'केही मीठो बात गर' को यो फरक ‘भर्सन’ सुन्नेलाई नारायणगोपालले नै गाएको हो भन्दा पत्यार लाग्दैन ।
मेरो माया कुन देश-मुलुक पेट पाल्नकै लागि मुगलान पस्न बाध्य नियतिले नेपालीलाई आजसम्म पनि छाडेको छैन । तर, समय र प्रविधिको परिवर्तनसँगै उवेला गाइने विछोडका गीत, तिनका शब्द र धुनमा आज बजारले प्रवेश पाएको छ । हिजोका पीडा आज ‘पप’ बन्न थालेका छन् ।